Zivocavoce | May 2022
Main > Zivocavoce
ijordan spieth Workout
IJordani spieth Workout - indlela yokuphatha
Ngabe uJordan Spieth's Caddy wenza malini ngonyaka? Ukuthi abanye abadlali bashibhile futhi abashintshela ephaketheni kuphela, akusho ukuthi wonke ama-caddy aphila ngama-nickel nama-dimes. Ngo-2015, owawina i-US Open, uJordan Spieth, wenza imali epholile eyi- $ 1.8 million. Umlingisi wakhe uMichael Greller wafaka ephaketheni u- $ 180,000 ngokusebenza kwakhe kulo mqhudelwano.
Ukuzivocavoca kweWatts - sizixazulula kanjani
Mangaki ama-watts okuzivocavoca okuhle? Ngokuvamile, umgibeli wamabhayisikili oqalayo angalinganisa ama-watts angama-75100 ku-1-hour Workout. Umbambiqhaza ofanele uzokala ngaphezu kwama-watts ayi-100, futhi abagibeli bamabhayisikili abangafinyeleleka bangafinyelela kuma-watts angama-400 ngehora.
Isivivinyo sokuzivocavoca - uphendula imibuzo
Ingabe kulungile ukusebenzela i-hungover? Ukuzivocavoca nge-hangover kungenzeka, uma unciphisa amandla, ngokusho komqeqeshi womuntu siqu. Kungakwenza uzizwe ungconywana. Futhi utshwala ngokulinganisela ngeke buphazamise imigomo yakho yokuqina, ucwaningo lukhombisa.
i-carbs eyinkimbinkimbi yokuthumela umsebenzi
I-carbs eyinkimbinkimbi yokuthumela umsebenzi - ukuthola izixazululo
Yimaphi ama-carbs amahle kakhulu ongawadla ngemuva kokuzivocavoca? Ubhatata, okusanhlamvu nezithelo kungaqukatha amazinga aphezulu ama-carbohydrate anempilo, njenge-quinoa. I-Quinoa ayinayo i-gluten, ihlukaniswa njenge-pseudocereal, futhi ivame ukusetshenziswa njengezinhlamvu. Inefayibha eningi futhi inamaprotheni amaningi, kanti inkomishi eyodwa inikezela ngo-8.14 g.
ukujula komgodi wesihlabathi
Ukuzivocavoca ngomgodi wesihlabathi - unquma kanjani
Kwenziwa yini ukusebenzisa isihlabathi? I-Sand iyithuluzi elihle lokuqeqesha lokwenza ngcono isivinini nokushesha. Inikeza ukumelana okuphonsela inselelo imisipha yakho, kukusize kukwenze usheshe futhi uqhume. Ukuhamba okungaguquki ngaphansi kwezinyawo zakho kuhlanganisa imisipha emincane yokuzinzisa ethuthukisa ibhalansi futhi inciphise ubungozi bokulimala.29. 2012.
izinhlelo zokuzivocavoca ebusika
Izinhlelo zokuzivocavoca ebusika - ungazilungisa kanjani
Yikuphi ukuzivocavoca okuhle kakhulu ebusika? 'Thatha imizuzu emihlanu kuya kweyishumi wenze ukuzivocavoca okusezingeni eliphansi njengokugijima endaweni noma ukwenza amajump weqa,' uyeluleka. 'Ngaleyo ndlela, lapho uphumela ngaphandle, uzobe usufudumele vele.' Ukugqoka kahle nakho kungasiza. Gqoka izendlalelo ukuze uzicwecwe njengoba izinga lokushisa komzimba wakho lenyuka. 16.01.2004
kabili ngesonto ukuzivocavoca
Ukuzivocavoca kabili ngesonto - izixazululo ezingaba khona
Ingabe kulungile ukuzivocavoca kabili ngesonto? Kepha uMans uthi ukuqeqeshwa kanye noma kabili ngeviki ngeke kukunikeze izinga eliphansi lokuqina. Kufanele uqeqeshe okungenani kathathu ngesonto uma ufuna ukufeza izinhloso zakho zempilo nokuqina ngesikhathi esilinganiselwe, futhi uhlale uphilile futhi uphilile, kuchaza uMans.
Ukuqiniswa kwemisipha ye-Stabilizer - ireferensi ephelele
Uyiqeqesha kanjani imisipha yokusimamisa? Indlela engcono yokuqinisa ama-stabilizers akho ukwenza izivivinyo kancane, usebenzisa izinsimbi eziphansi nokwenza inombolo ephakeme yokuphindaphinda. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthi ugxile ekubekeni nasekuqondanisweni, yingakho kufanele ngabe wenza izivivinyo kancane.
angikwazi ukulala ngemuva kokuzivocavoca
Angikwazi ukulala ngemuva kokuzivocavoca - ukuthi ungabhekana kanjani
Kungani ngingalali ngemuva kokuzivocavoca? Abantu abaningi banomuzwa wokuthi i-adrenaline ekhishwe ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba okukhulu iguqula izingqondo zabo zisebenze ngokweqile, okwenza kube nzima ukulala ngemuva kokuzivocavoca. Futhi ngempela, uma kunguwe, ngazo zonke izindlela qhubeka uzivocavoca ekuseni noma ekuseni kakhulu.
ukuphuza ngaphambi kokuzivocavoca
Yini okufanele uyiphuze ngaphambi kokuzivocavoca - izixazululo ezingaba khona
Yisiphi isiphuzo esingcono kakhulu sokuphuza ngaphambi kokuzivocavoca? Amanzi abalulekile ekusebenzeni. Kunconywa ukuthi uphuze amanzi neziphuzo eziqukethe i-sodium ngaphambi kokuzivocavoca umzimba ukukhuthaza ibhalansi yoketshezi nokuvimbela ukulahleka oketshezi ngokweqile.
Imikhuba yokuzivocavoca - izixazululo ezi-pragmatic
Yimiphi imikhuba emihle yokuzivocavoca umzimba? Umgomo omuhle wabantu abaningi ukusebenzela ukuzivocavoca amahlandla ama-5 ngesonto imizuzu engama-30 kuye kwangama-60 ngesikhathi. Uma imizuzu engama-30 kuya kwengama-60 ngasikhathi izwakala kunzima ukungena esimisweni esimatasa, ungahlukanisa umsebenzi wakho womzimba ube yiziqeshana zesikhathi.7. 2020.